Elite - jluis37.com
Posted by Lloyd Wilson On July 8, 2021 In My Blog
Novak Djokovic vs Denis Shapovalov – Shapovalov Memenangkan Satu Set – Ya @ 2.17 Wimbledon mencapai tahap akhir, dengan beberapa pertarungan yang menggiurkan di jalan. Salah satunya adalah no.1 dunia Novak Djokovic saat ini menghadapi bintang muda Kanada Denis Shapovalov. Petenis Serbia itu mendapatkan kemenangan yang relatif nyaman di perempat final atas Marton Fucsovics,
Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite – July 1 – blog blog
Posted by Lloyd Wilson On July 1, 2021 In My Blog
Belgium na Italytali – Otu abụọ a ga – enye goolu – Ee @ 2.03 Abụọ n’ime titan asọmpi ga-alụ ọgụ na nkeji iri na ise n’egwuregwu nke na-agaghị elebanye anya na Final. Ndị Beljọm, ndị bụ ndị nke 1 kachasị dị n’akụkụ ụwa, ka ga-efunahụ egwuregwu ma naanị otu ihe ha meriri megide
Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite – June 24 – blog blog
Posted by Lloyd Wilson On June 24, 2021 In My Blog
Croatia na Spain – ohere abuo – Croatia & Bịaruo @ 2.29 Croatia wepụrụ n’ọkwa otu mgbe mmeri 3-1 meriri Scotland, nke kwesịrị inye ha katapila ha chọrọ iji kwụọ ụgwọ maka ọkwa ikpeazụ nke asọmpi ahụ. N’aka nke ọzọ, Spain yiri onyinyo nke oge ọlaedo ha nke 2000 rue mbido afọ 2010, n’agbanyeghị
Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite – June 17 – website blog
England na Scotland – Oge obula Goalscorer – Harry Kane @ 1.80 Ọdụm atọ ahụ malitere mkpọsa ha nke ọma website Id mmeri 1-0 siri ike na Croatia na ngwụsị izu. Gareth Southgate nwere ike ịgbanye waistcoat, mana ọ dị ka 2018 ọzọ dịka England na-elekọta azụmahịa. Ihe mgbaru ọsọ Raheem Sterling chọkwara nkwado,
Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite – June 3 – site blog
Ndi-mo-ozi UFC – Jairzinho Rozenstruik vs August Sakai “Bigi Boy” enweela oke oge un siri iken’oge afọ gara aga na ọkara. Ọnwụ doro anya na onye mmeri dị ugbu a t Stake Brand Ambassador, Francis Ngannou na Machị sochiri mmeri TKO megide Junior Dos Santos. Mana mkpebi mkpebi Ciryl Gane na February afọ a
Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite – May 20 – site website
Arsenal vs Brighton & Hove Albion – 1 × 2 & Otu Abụọ Icheta – Arsenal & Ee @ 3.15 Ndị Gunners enweela oge dị egwu, na-apụ na Europa League ma na-efu ndị isi anọ ọzọ. Website t nke ahụ, akụkụ Mikel Arteta enwetala isi nke abụọ kemgbe ụbọchị Boxing, nken’onwe un bụ mmezu
Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite – May 13 – site website
Aston Villa na nke Everton – 1 × two – Everton @ 2.50 Ọ bụghị ihe nzuzo na ihe ịga nke ọma Aston Villan’oge a jikọtara ya na ahụike nke nwoke ahụ a ma ama, Jack Grealish. Ọ pụọla maka egwuregwu iri abụọ na abụọ Premier League gara aga, un t ndị otu na-enweta